50% လျှော့ဈေးနှင့် 450 Wild Core ရရှိဖို့ Onepay နဲ့ Codashop မှာ Wild Rift အတွက် Wild Core များဝယ်ယူပါ | Codashop Blog MM
Codashop Blog MM
Home Promo 50% လျှော့ဈေး...
50% လျှော့ဈေးနှင့် 450 Wild Core ရရှိဖို့ Onepay နဲ့ Codashop မှာ Wild Rift အတွက် Wild Core များဝယ်ယူပါ
ပရိုမိုးရှင်းကာလ – ၂၀၂၁ ဇူလိုင် (၂၆) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၁ ဩဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့အထိ
(၁)Wild Rift အတွက် Wild Core များဝယ်ယူရာတွင် Codashop ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် Onepay ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်စေ၊ Onepay အက်ပလီကေးရှင်း၏ ONE-Codes မှဖြစ်စေ ဝယ်ယူပြီး ၅၀% လျော့စျေးရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ အများဆုံးရရှိနိုင်သည့် ပမာဏမှာ ၂၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ ပရိုမိုးရှင်းရရှိရန် promo code “WR50OFF” အားထည့်သွင်းပေးရပါမည်။
(၂) ပရိုမိုးရှင်းကာလမှာ ၂၀၂၁ ဇူလိုင် (၂၆) ရက်နေ့ မှ ၂၀၂၁ ဩဂုတ်လ (၈) ရက်နေ့အထိဖြစ်သည်။ တစ်ဦးလျှင် (၂) ကြိမ်အထိ ၀ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး လူဦးရေအကန့်အသတ်ရှိပါသည်။
Wild Core ကံစမ်းနိုင်ရန်
(၁) အထက်ပါ ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Wild Rift အတွက် Wild Core များဝယ်ယူရာတွင် Codashop ဝက်ဆိုက်ဒ်တွင် Onepay ကိုအသုံးပြုပြီးဖြစ်စေ၊ Onepay အက်ပလီကေးရှင်း၏ ONE-Codes မှဖြစ်စေ ဝယ်ယူသောသူများသာလျှင် အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
(၂) ပရိုမိုးရှင်းကာလအတွင်း Wild Core များကို One Pay ဖြင့် ပေးချေသူများထဲမှ အပါတ်စဥ် (၅) ယောက်၊ စုစုပေါင်း (၁၀)ယောက်တိတိကို ရွေးချယ်ပြီး Wild Core 450 စီ ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၃) Wild Core ကံစမ်းသူများကို Codashop ၏ တရားဝင် ဖေ့ဘွတ်စာမျက်နှာမှတဆင့် အပါတ်စဥ် ကြေညာပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
(၄) Wild Cores များကို ကံထူးရှင်များ၏ Game ID အကောင့်ထဲသို့ ထည့်သွင်းပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကံစမ်းမဲလက်ဆောင်များကို ငွေသားဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ အခြားအမျိုးအစားဖြင့်ဖလှယ်ခြင်း၊ တစ်ဆင့်ခံပေးပို့ခြင်းများကို လက်ခံမည် မဟုတ်ပါ။
50% လျှော့စျေးအပြင် Wild Core 450 ကိုလည်း ကံစမ်းနိုင်ဦးမှာဆိုတော့ အခုပဲ Wild Core တွေကို One Pay နဲ့ မြန်မြန်ဝယ်လိုက်တော့နော်။
Top Up Wild Cores Now
(၁) ဤအစီအစဉ်သည် အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့်ပြီး မြန်မာပြည်တွင်းနေထိုင်သော မြန်မာနိုင်ငံသားများအတွက်သာ အကျုံးဝင်ပါသည်။
(၂) Onepay မှဝန်ထမ်းများနှင့် Codashop မှဝန်ထမ်းများ ဤအစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ခွင့်မရှိပါ။
(၃) ယခု အစီအစဉ် နှင့်ပက်သက်သောစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကို Codashop နှင့် Onepay မှ လိုအပ်သလို အချိန်အရွေး ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း များပြုလုပ်ခွင့်ရှိပါသည်။
(၃) Codashop သို့ Onepay ဖြင့် ငွေပေးချေမှုပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက Onepay Customer Care Center ၏ဖုန်းနံပါတ် 09 688383838 (သို့) Onepay Messenger သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်သလို [email protected] သို့လည်း အီးမေးလ်ဖြင့် ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားနိုင်ပါသည်။
(၄) Codashop မှ ဝယ်ယူရာတွင် အခက်အခဲတစ်စုံတစ်ရာ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါက Codashop Myanmar Facebook Page Messenger သို့ ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Previous articlecodashop_mm_official Instagram အကောင့်ကို Follow လုပ်ပြီး သင်နဲ့သင့်သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လုံး ဖုန်ဘေကံထူးနိုင်မယ့်အခွင့်အရေး
Next articleကိုယ်နဲ့ဂိမ်းအတူဆော့နေကျ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီစာရေးပြီး ဖုန်းဘေကံထူးနိုင်မယ့် အစီအစဥ်။
Telenor နဲ့ MLBB စိန်ဝယ်ယူပြီး Gaming Data Bonus 2...
မေလ Promotion မှာ MLBB နဲ့ အခြားသတ်မှတ်ထားသော ဂိမ်...
MLBB စိန်ဖြည့်ရင်း နှစ်သစ်ဆုလက်ဆောင်များ ကံထူးနိုင...
gumjala - May 13, 2022 0
Telenor Gaming Data Bon...
Codashop Global Series May 2022 MLBB Tournament စည...
Mothers’ Day မှာ အမေ့အတွက် Burmese Dream Gif...
Codashop Global Series April 2022 MLBB Tournament ...
MLBB ဂိမ်းထဲက ကံကောင်းခြင်းတွေကိုမျှဝေရင်း Codasho...
PUBG Mobile UC ကို easyPoints နဲ့ဝယ်ယူပြီး 52% အထ...
Telenor နဲ့ MLBB စိန်ဝယ်ယူပြီး Gaming Data Bonus 2GB ရယူလိုက်ပါ! May 13, 2022
Codashop Global Series May 2022 MLBB Tournament စည်းကမ်းများ May 11, 2022
မေလ Promotion မှာ MLBB နဲ့ အခြားသတ်မှတ်ထားသော ဂိမ်းများအတွက်ဝယ်ယူပြီး အလန်းစားဆုလက်ဆောင်တွေ ကံစမ်းလိုက်ပါ! May 9, 2022
Mothers’ Day မှာ အမေ့အတွက် Burmese Dream Gift Set ကံစမ်းလိုက်ပါ! May 6, 2022
Codashop Global Series April 2022 MLBB Tournament စည်းကမ်းများ April 20, 2022